२०७४ कात्तिक १५ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
पर्सामा फोरम नेपाल र राजपाले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाए, काङ्ग्रेस र वाम गठबन्धनको उम्मेदवार टुङ्गो लाग्न बाँकी
प्रस, वीरगंज, १४ कात्तिक/ मङ्सिर २१ गते हुने प्रदेश नं. २ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि मधेसी दलको गठबन्धन नेपाल सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले पर्सा जिल्लाको ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार तय गरेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपाको गठबन्धन तथा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले अहिलेसम्म सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा गठबन्धनले घोषित गरेको उम्मेदवारमा पर्सा क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रदिप यादव, क्षेत्र नं. २ बाट विमलप्रसाद श्रीवास्तव, क्षेत्र नं. ३ बाट हरिनारायण रौनियार र क्षेत्र नं. ४ बाट लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका छन् । चार सीटमा ३ सीट फोरम नेपाल र एक सीट राजपाले पाएको हो । यसैगरी प्रदेशसभामा क्षेत्र नं. १ को ‘क’बाट फिरोज मन्सुर, ‘ख’बाट लालबाबू राउत, क्षेत्र नं. २ को ‘क’बाट रामनरेशप्रसाद यादव, ‘ख’बाट सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मी, क्षेत्र नं. ३ को ‘क’बाट अब्दुल रहिम अन्सारी, ‘ख’बाट प्रह्लाद गिरी, क्षेत्र नं. ४ को ‘क’बाट रामचन्द्र पडित ‘ख’बाट सिंहासन साह कलवार छन् । प्रदेशसभामा राजपालाई २ र
म्यादी प्रहरीमा भर्ना गराउन रकम लिने तीनजना पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १४ कात्तिक/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले म्यादी प्रहरीमा भर्ना गराइदिने भनी रकम बुझेका तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले आज पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउ परेका तीनजनाले ४७ हजार घूस लिएको जनाएको छ । मङ्सिर २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावको लागि पर्सा प्रहरीले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेपछि भर्ना गराइदिने भन्दै पक्राउ परेका तीनजनाले ४२ जनासँग जनही ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म रकम उठाएको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको छ । प्रहरीले पर्सा जिल्ला बहुदरामाई नगरपालिका–१ निवासी हरिनारायण राम, बिसुनदेव यादव, छठु महरा चमारलाई पत्रकार सम्मेलनमा ठगिगरेको रकमसहित सार्वजनिक गरेको थियो । पक्राउ परेका यी तीनैसँग ४२ जनाको प्रवेशपत्रसमेत बरामद भएको प्रहरीले दाबी गरेको छ ।
चुनावी गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य
भरत सहनी राजनीतिक क्षेत्रमा दलहरूबीच चुनावी तालमेल तथा गठबन्धन हुनु सामान्य मानिन्छ । निर्वाचनमा राम्रो नतिजा प्राप्त गरी सरकार बनाउन राजनीतिक दलहरूले विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरूसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने गर्दछन् । भारतमा लामो समयदेखि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वकोे नेशनल डेमोक्र्याटिक एलायन्स (एनडिए) र काङ्ग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्स (युपिए)ले गठबन्धनको सफल अभ्यास गर्दै देशलाई स्थिर सरकार दिन सफल भएका छन् । तर हालसम्म नेपालको इतिहासमा चुनावी तालमेल तथा गठबन्धनको राम्रा अभ्यास नभए पनि गठबन्धनको सरकार भने धेरैपटक बनिसकेको छ । दलहरूबीच चुनावी तालमेल नभएकै कारण गणतन्त्र स्थापना भएको १० वर्षको अवधिमा ९ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रासामु छन् । सरकारमा नपुगेको कुनै दल नै देखिंदैन । यसरी घरीघरी सरकार परिवर्तन हुँदा देशमा लुटतन्त्र र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकोले देशमा स्थिर सरकार हुनु आवश्यक छ । अनावश्यक दल दर्ता तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण नेपालमा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने न्यून सम्भावना रहेकोले दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन तथा पार्टी एकताको प
औषधि मानिसको लागि आधारभूत आवश्यकता हो । तर अहिले औषधिको अभावले स्वास्थ्य संस्थाहरू रित्तो देखिन थालेका छन्, निजी क्लिनिकहरूमा मानिसको भीड बढन थालेको छ । जुन ठाउँ रित्तिए पनि, जुन ठाउँमा भीड बढे पनि मानिसले चिकित्सा सुविधा पाइरहेको छ भनेर सन्तोष मान्न सकिएला । तर नेपाली जनताको पैसा तिरेर स्वास्थ्योपचार गराउने हैसियत कति छ, त्यसमा पनि विचार पु¥याउनुपर्छ । सरकारले सबै जनतालाई समानरूपले चिकित्सा र औषधि उपलब्ध होस् भनेर गाउँ–गाउँमा चिकित्साको लागि तल्लो एकाइ स्वास्थ्य चौकी स्थापित गरेर, चिकित्सकद्वारा निश्शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र केही प्रारम्भिक औषधि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । औषधिको अभावले सेवाग्राहीहरू स्वास्थ्य चौकी नगएर निजी क्लिनिकमा पुग्छन् । यसबाट नागरिकले सरकारप्रदत्त चिकित्सा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने साँझ–बिहान हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने नेपालीले चिकित्सक र औषधिका लागि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । यस्तो हुनुमा नियतको होइन, कार्यान्वयन पक्षको त्रुटि देखिनु अपशोचजनक कुरा हो । नेपालको वर्तमान संविधानले सबै प्रकारका पुराना राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन गरेको छ
२०७४ कात्तिक १४ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
वनमन्त्री पाण्डेसहितको टोलीद्वारा फास्ट ट्र्याकको अनुगमन, तोकिएकै समयमा सेनाले कार्य सम्पन्न गर्नेमा आशावादी
प्रस, निजगढ, १३ कात्तिक/ वनमन्त्री विक्रम पाण्डेसहितको टोलीले सोमवार निजगढस्थित फास्ट ट्र्याक (दु्रतमार्ग)को अनुगमन गरेका छन् । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट बारा निजगढ आएका मन्त्री पाण्डेले कामलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएका छन् । वन मन्त्रालयबाट काममा कुनै समस्या नभएको र नहुने बताउँदै कुनै समस्या भए बेलैमा जानकारी गराउन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट ट्र्याक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल र नेपालीहरूको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएकोले निर्माण कार्य तोकिएकै समय सीमामा पूरा गर्न राज्य निरन्तर लागिपरेको उनले बताए । नेपाली सेनालाई राज्यले निर्माण सम्पन्न गर्न दिइसकेकोले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा आपूm र सरकार आशावादी रहेको वनमन्त्री पाण्डेले बताए । यसका निम्ति सबै जनता, तह तप्काका राजनीतिकर्मी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, कर्मचारीहरूले यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सम्पन्न गराउन निरन्तर सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नसमेत वनमन्त्री पाण्डे आग्रह गरे । सो मार्गमा पर्ने रूखको छपान कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको र हालसम्म १ हजार रूख छपान भइसकेको नेपाली सेन
वीरगंजमा डेंगुका ८ जना बिरामी
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ पर्सामा अहिले डेंगु रोगका बिरामीहरू देखा पर्न थालेको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पततलले जनाएको छ । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको प्रयोगशाला स्रोतको अनुसार अहिलेसम्म आठजना बिरामीमा डेंगु रोगको कीटाणु भेटिएको छ । वीरगंजस्थित ल्याब तथा अस्पतालहरूको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छैन । तर एकजना चिकित्सकका अनुसार पर्सामा ५० भन्दा बढी सो रोगका बिरामीहरू छन् । सरुवा बिरामी भएकोले समयमा नियन्त्रणमा गर्ने प्रयास गरिएन भने बिरामीको सङ्ख्या बढेर जाने उनको भनाइ छ । लामखुट्टेको टोकाइबाट सो रोग सर्ने भएकोले महानगरमा पहिले लामखुट्टे नियन्त्रण गर्ने अवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । यस बिषयमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साका निमित्त प्रमुख सच्चिदानन्द सिंहले डेंगु रोगका बिरामी देखा परेको जानकारी पाएको बताउँदै उनीहरूका लागि निश्शुल्क कीटको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको बताए । रक्त परिक्षणका लागि नेपाल सरकाले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साबाट निश्शुल्क कीट वितरण गरिंदै आएको उनले बताए । निजी ल्याबहरूमा सो रोगको परीक्षण महँगो भएकोले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्प्तालमा नै रक्तपरीक्ष्
शाह नर्सिङ्ग होमलाई बन्द गर्ने निर्देशन
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ वीरगंज आदर्शनगरमा रहेको शाह नर्सिङ्ग होमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले बन्द गर्ने निर्देशन दिएको समाचार प्राप्त भएको छ । बिनाइजाजत सञ्चालन भएको प्रमाण भेटिएपछि शाह नर्सिङ्गमा ताला लगाई बन्द गर्ने निर्देशन दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलले जानकारी गराए । सप्रजिअ पौडेलका अनुसार सो नर्सिङ्ग होम बन्द गर्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्सालाई आदेश दिइएको छ । केही महिना पहिले शाह नर्सिङ्गविरुद्ध एकजनाले दिएको उजुरीको आधारमा छानबिन गर्दै जाँदा शाह नर्सिङ्ग होम अनुमतिबिना सञ्चालनमा रहेको पाएपछि बन्द गर्न निर्देशन दिएको सप्रजिअ पौडेलले बताए । डा. रेखा शाहले सञ्चालन गरेको नर्सिङ्ग होमको अनुमति पत्रसमेत फेला नपरेकोले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले बताएको छ । नर्सिङ्ग होममा अहिले बिरामीहरू बसेको कारण तालाबन्दी गर्दा बिरामीहरू अलपत्र हुने भएकोले दुई दिनपछि नर्सिङ्ग होममा तालाबन्दी गर्ने निमित्त जनस्वास्थ्य प्रमुख सच्चिदानन्द सिंहले बताए ।
पर्साका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि अभाव
प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/ पर्सा जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अहिले औषधि अभाव हुन थालेको समाचार प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले पठाएको औषधि अहिलेसम्म वितरण हुँदै आएको स्वास्थ्य संस्थाहरूले जनाएका छन् । स्वास्थय चौकी बेल्वामा अहिले जुका, एसिलक तथा डाइजिन औषधि बाहेक अन्य औषधि नरहेको स्वास्थ्य चौकी प्रमुख अहमद रेजा अंसारीले बताए । दैनिक २०/२५ जना बिरामी स्वास्थय परीक्षणका लाीि आउने सो चौकीमा अहिले मुश्किलले २/३ जना आउने गरेको उनले बताए । नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म ३९ किसिमका औषधि स्वास्थ्य चौकीमार्फत् वितरण गर्दै आएकोमा अहिले स्थानीय तह गठन भएपछि सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको, औषधि खरिद गर्ने रकमसमेत गाउँपालिकाको खातामा पठाएको कारण औषधि अभाव भएको बताए । अब सम्बन्धित गाउँपालिकाले नै औषधि खरिद गर्नुपर्ने भएकोले यस्तो समस्या आएको चौकी इन्चार्ज अंसारीले बताए । गाउँका सबै बिरामी अहिले निजी क्लिनिकमा जाने गरेको अंसारीले बताए । आइरन चक्की सकिएको एक वर्ष हुन लागेको उनले बताए । यस बिषयमा जनप्रतिनिधिहरूलाई औषधि खरिद गर्न ताकेता गरे पनि केही नभएको अंस
काङ्ग्रेसमा वाम सङ्गठनको त्रास
विनोद गुप्ता संविधानसभाबाट संविधान बनाउन माओवादीले बा¥ह वर्ष विद्रोह ग¥यो जसमा हजारौं मानिस बलिदान भए । गृहयुद्धकै सँघारमा पुगेको मुलुकलाई आप्mनो बलबुतामा नेपाली जनताले मूलधारमा ल्याई राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उतारी संविधानसभाबाट संविधान २०७३ असोज ३ मा जारी भयो । यो नेपाली जनताको लागि ठूलो बुुद्धिमतापूर्ण कार्य एवं प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने तथा समृद्धिको अवसर हो । जारी संविधानले ०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र पूर्ण हुने शर्त राखेको छ । जुन संविधान निर्माताहरूको दोस्रो संवैधानिक कार्यभार हो । संविधान कार्यान्वयन गर्दै तीन तहको निर्वाचन नगरेसम्म लगभग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन कि सहमतिमा अगाडि बढनुपर्ने संविधानको मूल मर्म हो । स्थानीय तहको निर्वाचन त भयो तर संसद् र प्रदेशको निर्वाचन नहुँदै दलहरू लगभग दुई चिरामा विभाजित भए । माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता भएपछि काङ्ग्रेसले पनि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग एकता गर्न कम्मर कसेको छ । लगभग एकता भई नै सकेको छ । वाम र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच, पछि उदय भएको मधेसवादी दलहरूलाई पनि लगभग प्रजातान्त्रिक कित्तामा राखे
सर्लाहीमा नमुना मुसहर टोल
मानिसको प्रवृत्ति भिन्नाभिन्नै हुन्छ । त्यही प्रवृत्तिले कसैलाई जुझारु र कसैलाई दब्बु बनाउँछ । प्रवृत्तिले कसैलाई विकासोन्मुख बनाउँछ भने कसैलाई निरन्तर यथास्थितिवादी । तर यस प्रवृत्तिको विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुराको खोजखबर कमै भएको पाइन्छ । नेपालमा शोषित, दमित धेरै जातिमध्ये मुसहर पनि एउटा हो । नेपालको जातीय वर्गीकरणले गर्दा उपल्लो जातलाई जहिले र जहाँ पनि शिक्षा र अवसरको प्राप्ति भयो भने तल्लो जाति सबैको मानव अधिकार हनन गरियो । त्यसका पछाडि लामो जातीय इतिहासको भूमिका रहेको छ । सबै जातिको आप्mनो पुस्तैनी पेशा भएजस्तो मुसहरको भने कुनै परम्परागत पेशा छैन । डोमहरूले बाँसका दैनिक घरेलु उपयोगका सामग्री बनाउँछन्, कुमालेले माटाका भाँडाहरू बनाउँछन्, कसैले धातुका सामानहरू बनाउने पुस्तैनी पेशा पाएका छन्, कसैले लुगा सिउने । यी पेशा अँगालेका भए तापनि तल्लो जातिका भएकाले उनीहरूको जीविकोपार्जन यतिबाट सम्भव हुँदैन भने मुसहर जातिको पुस्तैनी कुनै पेशा नै छैन । त्यसैले उनीहरूले दैनिक श्रम गरेरै आजीविका कमाउनुपर्छ । त्यसैले उनीहरूसँग कुनै बचत हुँदैन र उनीहरू भूमिहीन हुन्छन् । देशमा निरन्तर राजनीति
२०७४ कात्तिक १३ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक
विज्ञको अभावमा भेन्टिलेटर सञ्चालनमा आएन
नाउक्षे अस्पतालका डा. रामविरुद्ध उजुरी प्रस, वीरगंज, १२ कात्तिक/ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको प्रसूतिगृहमा कार्यरत मेडिकल अफिसर डा. नागमणि रामविरुद्ध अस्पतालमा उजुरी पर्न थालेको छ । बिरामी र बिरामीका कुरुवाहरूसँग दुव्र्यवहार गर्ने र पेशाको मर्यादाभन्दा बाहिर गएर गालीगलौजमा उत्रिने जस्ता कार्य गरेको आरोप लागेको छ । भर्खरैको एक घटनामा बेथा लागेर प्रसूतिगृहमा भर्ना भएकी एकजना महिलाको कुरुवासँग उनले दुव्र्यवहार गरेका छन् । आपूmलाई डाक्टर मात्र नठान्न चेतावनी दिंदै शुरुमा आपूm गुन्डा रहेको डा. रामले बताए । उनले कुरुवालाई अपशब्द प्रयोग गरेका थिए । बिरामीका कुरुवाले तत्काल अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षलाई सोबारे जानकारी गराएका थिए । अध्यक्षले कार्यालयमा मेसुलाई निवेदन दिन बताउँदै कारबाई गर्ने आश्वासन दिएका थिए । अस्पतालका प्रवक्ता रमेश चौधरीले डा. रामविरुद्ध दुई–तीनवटा उजुरी आएको बताए । उनले यसबारे चिकित्सकसँग सोधपूछ गर्ने काम भइरहेको जानकारी गराएका छन् । प्रस, वीरगंज, १२ कात्तिक/ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको एनआइसियुमा रहेको भेन्टिलेटर विज्ञको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको
काङ्ग्रेस–एमाले सङ्घीयता समाप्त गर्ने दाउमा
प्रस, वीरगंज, १२ कार्तिक/ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता ठूला शक्तिले सङ्घीयता समाप्त पार्न खोजेको बताएका छन् । वीरगंजमा शुक्रवार आयोजित बृहत् पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकका ठूला शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता पार्टीहरूले सङ्घीयता समाप्त पारी शोषित, उत्पीडित जनतालाई फेरि पनि गुमराह गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् । फोरम नेपाल पर्साद्वारा नगरसभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष यादवले संविधान कार्यान्वयनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भनेको लोकतन्त्र र संविधान कार्यान्वयनको प्रथम अध्याय थियो भने प्रान्त/सङ्घको निर्वाचन द्वितीय अध्याय भएको बताए । “अब द्वितीय अध्याय शुरु हुँदैछ”–उनले भने–“प्रान्तको मुद्दा र अधिकारको सवालमा काङ्ग्रेस, एमाले कति इमानदार देखिन्छन् हेर्न बाँकी छ ।” मधेस प्रदेशको स्वायत्तताको सवालमा पनि ती दलको रणनीति सम्पूर्ण मधेसीको लागि घातक भएकोले सम्पूर्ण जनता सजग रहन आग्रह गरे । लामो समयदेखि असमानता, विभेद, शाोषण र उत्पीडनको शिकार भएको नेपाली जनताको लागि सङ्घीय फोरम वि
उपेन्द्र यादवद्वारा इनर्वामा कुस्ती उद्घाटन
प्रस, परवानीपुर, १२ कात्तिक/ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वीरगंज–१६ इनर्वामा आयोजित विराट कुस्ती प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका छन् । छठको थकाइ मेटन हरेक वर्ष दुई दिनसम्म आयोजना गरिने कुस्ती प्रतियोगितामा हजारौं दर्शक माझ शुक्रवार उद्घाटन गरिएको कुस्तीमा यादव, वीरगंजका मेयर विजय सरावगी, फोरम नेपाल पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादव, प्रतियोगिता आयोजक समितिका अध्यक्ष प्रमोद यादवलगायतको उपस्थिति थियो । सबैजना मधेसको पहिचान रातो पगरी लगाएर अखाडाको मञ्चमा चढेका थिए । शनिवारसम्म चलेको प्रतियोगितामा दुई दिनमा करिब अढाई सय जोड कुस्ती भएको प्रतियोगिता संयोजक मदन यादवले बताए । शुक्रवार नेपाल भारतका नामुद पहलमानहरूको दङ्गल प्रदर्शन गरियो भने आज नेपाल–भारतका महिला कुस्तीबाजहरूको लडाइँ भयो । भारतको बनारस, गोरखपुर, गाजियाबाद, पञ्जाब, हरियाणा, दिल्ली, मुम्बईलगायतका ख्यातिप्राप्त पहलमानहरू कुस्ती लडन आएका थिए । दङ्गलको उद्घाटन गर्दै उपेन्द्र यादवले आगामी निर्वाचनमा कुस्तीकै दाउ आवश्यक रहेको बताए । जसरी कुस्तीमा दाउ लगाएर प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गरिन्छ, त्यसगरी निर्वाचनम
अभिभावक शिक्षा आजको प्रमुख आवश्यकता
अनन्तकुमार लाल दास आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा बालबालिकाहरूको रेखदेख गर्न मुश्किल भइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई सही मार्गदर्शन प्रदान गर्नु झन् जटिल बन्दै गएको छ । सही अभिभावकत्व प्रदान गर्नु आज निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । प्रत्येक अभिभावकको चाहना आप्mनो सन्तानलाई ‘सुपर चाइल्ड’ बनाउने हुन्छ तर धेरैजसो अभिभावकले आप्mनो सन्तानलाई संस्कार र संस्कृति सिकाउन चाहिने जति परिश्रम गरेको पाइँदैन । आश्चर्यको कुरो के हो भने हरेक अभिभावक आप्mनो सन्तानमा सुपर चाइल्ड जस्तै पढाइमा राम्रो होस्, नृत्यसङ्गीतमा राम्रो होस्, ध्ययन गर्ने बानी होस्, आपूmभन्दा ठूलोको सम्मान गर्ने बानी होस्, समयमा खाना खाओस्, बजारको खाना वा जङ्क पूmड नखाओस्, धूलो–घाममा नखेलोस् भन्ने चिताउँछन् । यहाँनिर एउटा गम्भीर प्रश्न के उठछ भने जहाँ अभिभावकले यति विशिष्ट गुण उसको सन्तानमा हुनुपर्ने कल्पना गर्दछ आपूmमा भने कस्तो विशिष्ट गुण चाहिन्छ त्यसबारे किन चिन्तन गर्दैन ? अर्को प्रश्न के उठछ भने यदि केटाकेटीहरूलाई राम्रो बनाउन तालिम दिइन्छ भने राम्रो अभिभावक बन्न तालिमको आवश्यकता किन कसैले महसुस गर्दैन ? यो एउटा ज्वलन्त प्रश्न हो । आ
गुणस्तरमा ध्यान दिऔं
पूर्व–पश्चिम राजमार्गका पुलहरूको अवस्था जीर्ण छ । तत्कालीन सोभियत सङ्घ सरकारको सहयोगमा निर्मित अधिकांश पुलहरू लामो समयदेखि मरम्मतको अभावमा जीर्ण बन्दै गएका हुन् । पछिल्लो समयमा भारत सरकारको सहयोगमा पनि केही पुलहरू बनेका छन् । सडक विभागले पुल मरम्मतको काम गर्ने हो । सरकारले बर्सेनि सडक, पुल मरम्मत–सम्भारका लागि बजेट विनियोजन गर्छ । सडक र सो सडकमा पर्ने पुलहरूको निर्माण हुन नसक्नुले नेपालको विकासमा गति आउन सकेको छैन । सडकको अवस्था मात्र राम्रो हुने हो भने विकासले अप्रत्याशितरूपमा गति लिने कुरालाई नकार्न सकिन्न । राजधानीसँग जोडिने अहिले प्रायः सबै सडकखण्डहरूको अवस्था राम्रो छैन । एक दशकको अवधिमा टाटासुमो सञ्चालन हुने कुलेखानी–दक्षिणकाली सडकखण्ड भारत सरकारको सहयोगमा कालोपत्र गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा टेन्डरबाट गराइएको सो सडक मार्गको निर्माण ठेक्का एउटा कम्पनीले करिब आधा मोलमा कबोल ग¥यो । सो ठेक्का पनि उसले आफैं नगरी केही मुनाफा लिएर साना ठेकदारहरूको जिम्मा लगायो । आफै त कममा सकार गरेको ठेक्का, मुनाफा लिएर साना ठेकदारहरूमार्फत् काम गराएपछि त्यो सडक पूरा बन्न पनि नपाएर बिग्रियो
२०७४ कात्तिक ०९ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
फोरम नेपालमा प्रवेश निश्शर्त– श्रीवास्तव
प्रस, वीरगंज, ८ कात्तिक/ वीरगंजका पूर्व नगरप्रमुख विमलप्रसाद श्रीवास्तवले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै आपूm र आप्mना समर्थकह Labels रूसहित सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । आप्mनै घरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर श्रीवास्तवले उक्त घोषणा गरेका हुन् । पूर्व नगरप्रमुख श्रीवास्तवले परिस्थितिवश पार्टीहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले सो कुरालाई मनन गरी आगामी शुक्रवार सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालमा प्रवेश गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले फोरममा प्रवेश बिनाशर्त भइरहेको पनि दाबी गरे । पत्रकारहरूले निश्शर्त पार्टी परित्यागको कुरा आम मानिसले पत्याउन नसक्ने भनी प्रश्न गर्दा श्रीवास्तवले भने– “हामी निश्शर्त नै प्रवेश गर्दैछौं ।” तर उनले राजनीति जोगी हुनको लागि नगरिने हुनाले कुर्सीको खेल हुन सक्ने कुरा भने इन्कार गरेनन् । तत्कालै कुनै पदमा बार्गेनिङ नभएको र पछि दिइने पद सहर्ष स्वीकार गर्ने पनि बताए । उनले गत स्थानीय निर्वाचनमा परिस्थितिवश एकै दिनमा आप्mना शुभचिन्तकहरूसहित महानगरको चुनावमा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था भएकोले नेपाल
पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीद्वारा विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग
प्रस, वीरगंज, ८ कात्तिक/ मध्यमाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ हेटौंडा र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी सङ्घ वीरगंजले नेपाल आयल निगमसँग विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दैै कात्तिक १५ गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थका सम्पूर्ण ढुवानी ठप्प गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सङ्घका अध्यक्ष्F मनोजकुमार दास तथा महासङ्घका अध्यक्ष्F दिपक शिवाकोटीले विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालय, अमलेखगंजका प्रमुख प्रदीप यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । आयल निगमले आपूmखुशी ६३ वटा ट्याङ्करलाई पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीको इजाजत दिएपछि विवाद शुरु भएको हो । पहिले पनि नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी नियमावली २०७३ विपरीत ट्याङ्करलाई इजाजत दिएपछि देशभरिका ढुवानी ठप्प भएको थियो । २०७४/२/२१ गते भएको सहमति अनुसार बैठकले दर्ता भएको सवारी खारेज गर्ने सहमति भए तापनि ती ट्याङ्करहरूमध्ये हिजो ना. ७ ख ५७८६ लाई रक्सौल डिपोबाट तेल भर्न आदेश दिएपछि विवाद शुरु भएको हो । विगतमा भएको सहमतिविपरीत नेपाल आयल निगम, क्षेत्रीय कार्यालयले दुईवटा ट्याङ्करलाई पुनः तेल भर्न इजाजत दिएपछ
राजमार्गका अधिकांश पुलहरू धरापमा सडक भत्किन रोकिएन, मरम्मत गरेको दुई हप्तामैं बिग्रन्छ
प्रस, निजगढ, ०८ कातिक/ पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बारामा पर्ने अधिकांश साना/ठूला पुल धरापमा परेका छन् । करोडौ खर्चेर पटक–पटक गरिएको पुल मरम्मत, सम्भार एक वर्ष पनि नबित्दै पुनः पुरानै अवस्थामा पुग्ने गरेको छ । राजमार्गस्थित बाराको बकैया पुल, आरसिसी पुल, पसाहा पुल, १ नम्बर, २ नम्बर, ३ नम्बर पुललगायत एक दर्जन भन्दा बढी ठूला र साना पुलहरू भत्किएर कामै नलाग्ने अवस्था परिणत हुँदै गएका छन् । सोही राजमार्गको निजगढ–पथलैया सडकखण्डमा रहेको दुधौरा पुलको पिलर तीन महिना यता पुनः भासिएको छ । ३ वर्ष अघि पनि यसरी नैं पुलको अघिल्लो पिलर धसेको थियो । पिलर धसेसँगै पुलबाट आवगमन बन्द छ भने खोला बगरबाट ड्राइभर्सन बनाएर गाडी आवत जावत हुँदै आएको छ । राजमार्ग निर्माण हुँदादेखिकै यी पुलहरूको राज्यले बेलैमा मरम्मत, सम्भार नगर्दा पुलको अवस्था जीर्ण बनेको हो । पुलबाट एउटा मात्र ठूलो सवारी साधन गुडन सक्ने भए पनि सवारी साधनका चालकहरूले जर्बजस्ती पुलमा गाडी छिराउने गर्छन् । पुलको भारवहन क्षमताभन्दा बढी लोड भएका गाडीहरूको चाप बढी भएकोले पनि चार दशक पूरा हुन नपाउँदै यहाँका पुल जीर्ण अनि धरापमा पर्छ
नगरप्रमुख र नगरवासीको पारस्परिक सम्बन्ध
ई. गोपाल श्रेष्ठ नगर प्रमुख र नगरवासीको पारस्परिक सम्बन्ध हुन्छ । नगरवासी नै भएन भने नगर प्रमुख हुने कुरा नै भएन । सानो नगरको प्रमुखको दायित्व ठूलो नगरको प्रमुखको तुलनामा सानो नै हुन्छ भने ठूलो नगरको प्रमुखको दायित्व सानो नगरको प्रमुखको तुलनामा ठूलो हुन्छ । हाम्रो वीरगंज नगर ठूलो अर्थात् महानगर भएकोले हाम्रो नगर प्रमुखको दायित्व पनि स्वाभाविकरूपले ठूलो अर्थात् विशाल छ । गत २० वर्षसम्म स्थानीय चुनाव हुन नपाएर हामीले नगर प्रमुखको सेवा पाउन सकेनौं । त्यसकारण पनि हामीले बल्लतल्ल पाएको नगर प्रमुखलाई हर्षोल्लासका साथ स्वागत गर्नु नै पर्छ । हाम्रो महानगरमा समस्या र चुनौतीहरू चाड्ढो चाङ छ अर्थात् नगर प्रमुखलाई मात्र उक्त समस्या समाधान गर्न दिइयो भने उनीमाथि हामी महानगरवासीले अन्याय गरेको ठहर्छ । महानगरवासी धेरै, महानगर प्रमुख एक्लो भएको हुँदा धेरै समस्या त हामीले नै समाधान गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो महानगरको ठूलो समस्या भनेको अनियन्त्रित जनसङ्ख्या हो । जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा हामीले हाम्रो प्रमुखलाई सहयोग ग¥र्यौ भने त्यो उदार सहयोग हुन जानेछ । जनसङ्ख्या अनियन्त्रित हुँदा शिक्षा, स्व
छठ पर्व ः एक सान्दर्भिक चर्चा
सञ्जय साह मित्र हाम्रो लोकजीवनमा अनेक पर्व मनाइन्छ । यस्ता पर्वहरूमध्ये कतिपय लोकमान्यताका हुन्छन् भने कतिपय शास्त्रीय मान्यताका । लोकमान्यताका पर्व तथा सांस्कृतिक उत्सवहरूमा कुनै ब्राह्मणको आवश्यकता मूलतः पर्दैन । जसले गर्दछ उसलाई त्यसको सबै विधिविधान थाहा हुन्छ । यप प्रकारको पर्व वा संस्कृतिमा स्थान र परिवार विशेषमा भिन्नता देखिन्छ । शास्त्रीय मान्यताका पर्व वा संस्कृतिमा भने निकै हदसम्म एकरूपता पाइन्छ । यसको विशेषता यो पनि हो कि यस किसिमका पर्व वा संस्कृति मान्न कुनै पुरोहितको आवश्यकता पर्दछ । सर्वसाधारणले आप्mनो अनुकूलता हेरी पर्व र संस्कृति मान्ने वा नमान्ने तथा त्यही अनुकूलता वा प्रतिकूलताले लामो समय लिंदा पर्व हराउने वा परिवर्तन हुने गर्दछ । कतिपय के भन्छन् भने कुनै पनि महिनाको शुक्ल षष्ठी स्वतः सूर्यषष्ठी हो । अझ सूर्यषष्ठी र आइतवारको संयोग मिल्यो भने निकै उत्तम । यस प्रकारको अवसर जुन महिनामा मिल्छ छठ गर्दा हुन्छ किनभने सूर्यपूजा भन्नु नै छठपर्व हो । तर यो मान्यता वर्तमान छठसित त्यति मेल खाँदैन । छठमा मूल अघ्र्य सूर्यलाई दिइन्छ तर षष्ठीको अघिल्लो दिनको राति गरिने खरना
तीन वर्षमा ८३ प्रतिशत
सन् २०१४ मा १५ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा वीरगंजमा सञ्चालित मझौला शहरी एकीकृत वातावरणीय सुधार परियोजनाको काम आजको मितिसम्म ८३ प्रतिशत सम्पन्न भएको बताइन्छ । यो तथ्याङ्क कतिको भरपर्दो छ त्यो कि ठेकेदार कम्पनीलाई थाहा छ कि परियोजना व्यवस्थापकलाई । योबाहेक नवनिर्वाचित मेयर वा महानगरका पदाधिकारीले पनि ठोकुवा भन्न सक्दैनन् । किनभने असोज २२ गते मेयरले ठेकेदार र परियोजना व्यवस्थापनसँग छलफल गर्दा काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको र अन्तिम म्याद २०१७ नोभेम्बर २६ सम्म सम्पन्न हुने ठोकुवा भएको थियो । छलफल भएको भोलिपल्ट मेयरले परियोजनास्थलको अनुगमन भ्रमण गरेका थिए त्यस बेला पनि ठेकेदार प्रतिनिधिले दुई महिनाभित्र काम सम्पन्न भइसक्ने बताएका थिए । अहिले कात्तिक ७ गते झन्डै दुई हप्ता अर्थात् १५ दिनपछि परियोजना व्यवस्थापक ९० प्रतिशत मात्र सकिएको बताउँछन् । भनाइको अर्थ दुई हप्ता कामै भएन त ? कि जनताले हिजो भनेको कुरा बिर्सन्छ, जुन बेला जे भनेर थुम्थुम्याए पनि हुन्छ भन्ने ठानेको हो ? यस परियोजनाको नाम मझौला शहरी एकीकृत वातावरण
२०७४ कात्तिक ०८ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
एडिबीको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको काम ८३ प्रतिशत मात्र सम्पन्न
हात्ती आयो–हात्ती आयो फुस्स एडिवीको सहयोगमा वीरगंजमा सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना सम्पन्न भएपछि वीरगंजको पानी जम्ने र घरको प्रदूषित पानी व्यवस्थापन हुने हल्ला पैmलाइए पनि अहिले आएर घरको प्रदूषित पानीको समग्र व्यवस्थापन नहुने देखिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि पुरानो वीरगंज नगर क्ष्Fेत्र डुबान समस्याबाट मुक्त हुने भए पनि घरबाट निस्किने प्रदूषित पानीको समग्र व्यवस्थापन हुन नसक्ने देखिएको छ । आयोजनाको कामबाट पुरानो वीरगंजमा रहेको करिब ३२ हजारमध्ये ३ हजार घरको प्रदूषित पानी मात्र व्यवस्थापन हुनेछ । वीरगंज महानगरमा हाल ३२ हजार पुरानो र नयाँ थप भएको ११ वडाको २५ हजार गरी ५७ हजार घरधुरी रहेका छन् । यो हिसाबले वीरगंज महानगरको करिब ५ प्रतिशत घरधुरीको फोहर पानी मात्र व्यवस्थापन हुनेछ । श्रीपुरको कृषि सामग्री संस्थानदेखि छपकैयाको हाजी अलि रोडमा पर्ने घरहरूको प्रदूषित पानीले मात्र निकास पाउँछ । अहिले आयोजनाले सोही क्ष्Fेत्रको प्रदूषित पानी श्रीसियामा ट्रिट गरी नदीमा फाल्ने योजना बनाएको छ । प्रस, वीरगंज, ७ कात्तिक/ वीरगंज महानगरमा एडिबीको सहयोगमा सञ्चालित मझौ
प्रदेश नं. २ को समृद्धिको लागि महाअभियान
प्रस, वीरगंज, ७ कात्तिक/ भोर, अभियानी तथा अनुसन्धानमूलक परोपकारी संस्थाले प्रदेश नं. २ को आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिको लागि महाअभियान अगाडि सारेको छ । जनकपुर, पगलाबाबा धर्मशालाबाट हिजो सो अभियानको शुभारम्भ गरिएको हो । वरिष्ठ साहित्यकार डा. राजेन्द्र विमलको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा सकारात्मक परिवर्तनको संवाहक ६५ योद्धाहरूको सहभागिता रहेको बताइएको छ । सो अवसरमा प्रदेश नं. २ को आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिको लागि संवाद कार्यक्रम पनि गरिएको थियो । कार्यक्रममा रामाशीष यादव, सुरेश शर्मा, शिवनाथ झा, सरोज राय, सरोज मिश्रा, विजय झा, राजकिशोर रजक, प्रदीप दत्त, रामबाबू ठाकुर, सिया सदा, चन्देश्वर सदालगायतको सहभागिता थियो । भोरका कार्यकारी सदस्य मिथिलेश साहले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए । भोर अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा प्रदेश नं. २ को ८ जिल्लामा सरकारी, गैरसरकारी र सरोकारवालाको सहकार्यमा अन्तत्र्रिmया गर्ने बताइएको छ । दोस्रो चरणमा प्रत्येक जिल्लाको भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न जिल्लाको विज्ञहरूको सहयोगमा रिपोर्ट तयार
घोराहामा ६१ जनाले रक्तदान गरे
प्रस, वीरगंज, ७ कात्तिक/ कलैया उपमहानगरपालिका–२१, घोराहामा रहेको समाज युवा विकास क्लबले रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ । वडाध्यक्ष पुनदेव रौनियारले रक्तदान कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै घोराहामा पहिलोपटक रक्तदान हुन लागेकोमा क्लबलाई धन्यवाद दिएका थिए । उनले सामाजिक क्रियाकलाप, मानव सेवाको लागि आयोजित कार्यक्रमहरूमा वडाबाट सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए । क्लबका अध्यक्ष्F मनोज जैसवालको अध्यक्ष्Fतामा सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा ६१ जनाले रक्तदान गरेको रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगंजका नीतेश साहले बताए । रक्तदान कार्यक्रममा छोटेलाल चौधरी, असलम अन्सारी, उपेन्द्र विश्वकर्मा, कृष्ण राम, कान्तिकुमार सिंह र कृष्ण चौधरीलगायतले रक्तदान गरेका थिए भने सुनील चौधरी, जितेन्द्र महतो, सत्येन्द्र साह र विक्रम पटेलले प्राविधिक सहयोग पु¥याएका थिए ।
स्थानीय सरकारबाट शैक्षिक सुधारको सम्भावना
भरत सहनी शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विद्यालय जाने उमेरका आधारभूत तहका ९ प्रतिशत र माध्यमिक तहका करिब ६१ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचमा आउन सकेका छैनन् । अर्कोतिर कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ३८ प्रतिशत बालबालिकाहरू मात्र कक्षा १० सम्म पुग्ने गरेकोे तथ्याङ्कले देखाउँछ । कक्षा ३ का छात्रछात्राहरूको पठन क्षमता २७ प्रतिशत मात्र छ । त्यसैगरी कक्षा ५ को अङ्ग्रेजी, गणित र नेपाली विषयको सिकाइ उपलब्धि क्रमशः ४८, ४७ र ४६ प्रतिशत रहेको छ । माथिका यी तथ्याङ्कबाट सार्वजनिक शिक्षाको सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेको र यसको सुधार नितान्त आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक शिक्षाको विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न नीतिगत व्यवस्था हुँदै आएको छ । सङ्घीय नेपालको संविधान २०७२ ले पनि शिक्षालाई मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३२ मा राखेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निश्शुल्क गरेको छ । विद्यालय सुधारलाई केन्द्रित गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले पनि विद्यालय शिक्षाको समता, ग
पछि नपाइने चीज
एउटा विश्वप्रसिद्ध उखान छ, धन गए केही गएन–फेरि कमाउन सकिन्छ, स्वास्थ्य गए केही गयो तर चरित्र गयो भने पुनः प्राप्त हुँदैन । तर इतिहास पल्टाइहेर्दा धेरै यस्ता उदाहरण पाइन्छ कि चरित्र गए पनि मानिसमा अटुट लगन छ भने पुनः प्राप्त भएको छ । रत्नाकर डाकूको कुनै चरित्र थिएन, तर पछि वाल्मीकि बने । आजको विश्वमा एउटा कुरा छ, जुन पछि पाउँदै पाइन्न । त्यो हो भूमि । हो आज जनसङ्ख्या वृद्धिको जुन रूप छ, आयुष्यले दीर्घता पाइरहेको छ, मानिसलाई भूमिको निकै खाँचो छ । भूमि छैन भने मानिसका लागि कुनै आधार छैन । खानको लागि अन्न उत्पादन गर्न भूमि चाहिन्छ, बस्नका लागि घर बनाउन भूमि चाहिन्छ । र सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा सार्वजनिकस्थलहरू निर्माण गर्नका लागि पनि भूमि नभई हुन्न । तर विडम्बना के छ भने नेपालबाट भूमि विस्तारै हराउँदै गएको छ । हराउनुको अर्थ सार्वजनिक जग्गाहरूमाथि भूमाफिया र अतिक्रमणकारीहरूको कब्जा हुँदै गएको छ । नेपालका पुराना शहरहरूमा खेल मैदान बनाउनयोग्य ठूलो भूखण्डको त कुरै छाडौं, सानो प्रहरी बिट बनाउन पनि कतै जग्गा पाइन्न । पहिलेदेखि नै थिएन, सबै व्यक्तिको नम्बरी जग्गा थियो भन्ने पनि होइन । लोभलालचल
२०७४ कात्तिक ०७ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
ऐतिहासिक पारसनाथ मन्दिरको संरक्षणमा जुटे गाउँपालिका अध्यक्ष
प्रस, वीरगंज, ६ कार्तिक/ पर्सा जिल्लाको नामाङ्करण भएको ऐतिहासिक मन्दिर पारसनाथको संरक्षणमा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप जैसवालले चासो देखाएका छन् । सखुवापरसौनी– ५ महुवनमा पर्ने करिब ३ सय वर्ष पुरानो मन्दिरको संरक्षणमा नवनिर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष जैसवाल तथा अन्य पदाधिकारीसहित गाउँले जुटेका छन् । छठपूजाको अवसर पारी गाउँपालिका अध्यक्षले ऐतिहासिक मन्दिर र मठको सार्वजनिक पोखरीको डिल अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको जग्गा खाली गराउने अभियान चलाएका छन् । दुई सातादेखि उनले गाउँमैं भद्रभलादमीहरूलाई बसाएर पारसनाथ मठको अतिक्रमण खाली गराउने सहमति जुटाएका थिए । त्यसपछि स्काभेटर लगाएर करिब दुई दर्जन पक्की, खपडा र फुसको घर भत्काएको अध्यक्ष जयसवालले जानकारी गराए । मन्दिरलाई पर्साकै नमुना पर्यटकीय स्थलको रूपमा संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्ने योजना रहेको उनले प्रतीकलाई बताएका छन् । दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधिको अभावमा मन्दिरको भवन, जग्गा र सम्पत्ति हिनामिना भएको छ । अतिक्रमण हटाउने, अनियमितताको खोजी गर्ने र ऐतिहासिक पारसनाथको मन्दिर हेर्न लायकको बनाउने उनले दाबी गरेका छन् । पारसनाथ मन्दिरबाटै पर
विपी उद्यानबाट हड्ढङ बजार हटेन
प्रस, वीरगंज, ७ कात्तिक/ विपी उद्यान वीरगंजमा रहेको हड्ढङ बजारको नामले परिचित खुद्रा कपडा बजार हटाउनुको सट्टा महानगरले सोलाई व्यवस्थित गर्ने काम शुरु गरेको छ । वर्र्षौंदेखि सो स्थानमा कब्जा जमाएर बसेका खुद्रा कपडा व्यवसायीहरूले नगरपालिकालाई व्यवसाय करबाहेक अन्य कर दिंदैनन् । महानगरको जग्गामा व्यवसाय गर्दै आएका उनीहरूले अहिलेसम्म जग्गा करबापत रकम भने दिएका छैनन् । त्यस्तै जग्गामा पसल थापेबापत पनि कर तिरेका छैनन् । सामान्यतया महानगरभित्रको पान पसलदेखि ठूला पसलहरूले तिर्दै आएको व्यवसाय कर मात्रै उनीहरूले तिरेका छन् । महानगरपालिकाले खुद्रा व्यवसायीहरूसँग व्यवसाय करबाहेक अन्य कर नलिए पनि सो स्थानमा कारोबार गरेबापत व्यवसायीहरूले राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ सङ्गठन, स्थानीय क्लब र केही दबङ्ग व्यक्तिलाई अघोषित रङ्गदारी बुझाउँदै आएका छन् । हड्ढङ बजारको नामले परिचित सो बजार हटाउने प्रयास भएको थियो तर त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म बजार हटेको छैन । पछिल्लोपटक कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइरालाको पालामा हटाउन खोजिएको थियो । मीनाबजार व्यवस्थित गर्न विपी उद्यानमा रहेको तरकारी बजारसँगै हड्ढङ बजार
५ महिलासहित १०३ जनाद्वारा रक्तदान
प्रस, वीरगंज, ७ कात्तिक/ घडिअर्वा स्पोर्ट्स क्लबले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ५ महिलासहित १०३ जनाले रक्तदान गरेको रक्तसञ्चार केन्द्र, वीरगंजका प्राविधिक नितेश साहले बताए । छठपूजाको अवसरमा प्रत्येक वर्ष रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको घडिअर्वा स्पोटर््स क्लबले यस वर्ष पनि रक्तदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आज भएको रक्तदान कार्यक्रमको वीरगंज महानगरका मेयर विजय सरावगीले उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रमका अध्यक्ष लखनलाल गुप्ताले रक्तदान गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । कार्यक्रममा खुशी श्रेष्ठ मरहठ्ठा, ज्योति गिरी, पूनम गुरुङ, सञ्जुकुमारी साह र मधुमाया यादव गरी ५ महिलाले रक्तदान गरेका थिए । यसैगरी सुशील वर्णवाल, सुभाष गुप्ता, आशु सर्राफ, सन्तोष मरहठ्ठा, मनोज कानू, नितेश पाण्डे, प्रभाकर गुप्ता, विवेक श्रीवास्तव, अमित गुप्ता, प्र्रकाश कुमारलगायत कुल १०३ जनाले रक्तदान गरेको प्राविधिक साहले बताए । रक्तदान कार्यक्रममा रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगंजका जीतेन्द्र महतो, सत्येन्द्र साह, दुर्गा चौधरी, अशोक साह, र ऋषभ अधिकारीले प्राविधिक सहयोग पु¥याएका थिए ।
आजदेखि छठपूजा शुरू
प्रस, वीरगंज, ७ कात्तिक/ छठ पर्व आजदेखि विधिवत् शुरु भएको छ । छठ पर्व विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा मनाइँदै आएकोमा केही वर्षदेखि यो पर्व देशभर मनाउन थालिएको छ । देशभर मनाइन थालेपछि तराईमा मात्र छठको बिदा दिंदै आएको सरकारले केही वर्षदेखि देशभर सार्वजनिक बिदा दिन शुरु गरेको छ । छठको बिदा यसपटक कात्तिक ९ गते दिइएको छ । छठ व्रत गर्नेहरूले आज चौथीको दिन अरवा–अरवाइन गरी चोखीनीति हुने गर्दछन् । व्रतालुहरूले आजदेखि आमिष भोजन परित्याग गरी शुद्ध निरामिष भोजन गर्दछन् । यसो त छठ व्रतालुहरूले असोज कोजाग्रत पूर्णिमाको भोलिपल्टदेखि कात्तिक स्नान शुरु गरी शाकाहारी हुने गर्छन् भने केही व्यक्तिहरू आजदेखि शाकाहारी हुन्छन् । छठ पर्वको शुरुसँगै तराईमा पोखरी, नदी, तलाउहरू सरसफाइ गर्ने र सिंगार्ने कार्य शुरु भइसकेको छ । वीरगंजको छपकैया, बजार छपकैया, नगवा, इनर्वा, घडिअर्वा, रानीघाट, पानीटङ्की, मुर्ली, तेजारथटोल, पिपरा, रामगढवा, लक्ष्मणवा र श्रीसिया नदी तथा सिन्घा नदी आसपासका बासिन्दा ठाउँ–ठाउँमा छठपूजा गर्छन् । वीरगंज महानगरपालिका र सम्बन्धित वडाले आआप्mनो क्षेत्रमा छठघाटको तयारी जोडतोडका साथ